काठमाडौंमा बनस्थलीबाट लैनचौरसम्मको त्याे नमिठो यात्रा… – List Khabar
Home / रोचक / काठमाडौंमा बनस्थलीबाट लैनचौरसम्मको त्याे नमिठो यात्रा…
admin January 21, 2022 रोचक Leaveacomment 128 Views
उसो त बनस्थली रत्नपार्क रुटका गाडीहरू त्यति सजिलै पाउन गाह्रो । त्यसमाथि यो रुटका गाडीमा मान्छेको ठेलमठेल र भीडभाड देख्दा गाडी नै चढ्नु नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।अब यति भनेपछि तपाईं भन्नुहोला कि हिँडेर गए भैहाल्यो नि !
गाँउतिर हो भने घण्टौं हिडेर आफ्नो दैनिक काममा जानेहरू कैयौं छन् । घण्टौं भिर, पाखा, खोला पन्छाउँदै साना नानीबाबुहरू हरेक दिन स्कुल जाने गरेकै छन् । म आफैं पनि गाउँ हुँदा डेढ घण्टाको बाटो हिँडेर ११-१२ पढेकै हुँ । अब दुईचार वर्ष शहर के बसियो हिड्ने भन्ने कुरा चटक्कै बिर्सिएछ क्यार ।
सहचालक थप्छन्, ‘भाडा बढिसक्यो आन्टी ।’.
Previous सोनिका रोकायको अहिलेसम्मकै हट भिडियो बाहिरियो (भिडियोसहित)
Next आज रातिदेखि उपत्यकाका यी क्षेत्र बन्द गर्न प्रशासनको आदेश (आदेशसहित)